Vakawanda munyika vari kuchema aive mutambi webasketball ane mukurumbira pasi rose Kobi Brayant uyo akashaya nezuro kuAmerica. Kobi Bryant akashaya munjodzi yekudonha kwechikopokopo kuCalabasa, California.
Bryant uyo aitambira maLos Angeles Lakers ndiye mumwe wevanhu vapfumbamwe vakashaika munjodzi iyi mushure mekunge chikopokopo yake yabatira moto ndokubvira, zvichisiya vese vanga varimo vashaika.
Aimbove munyori mukuru weZimbabwe Basketball Association VaTendai ‘Barnes’ Zhakata vanoti varwadzikana zvikuru nekushaikwa kwemutambi uyu vachiti ivo aive chiratidzo chezvakanaka kune vatambi vechidiki vari kukura mumutambo uyu.
Bryant akabatsira chikwata chake kutora mukombe weNational Basketball Association kashanu uyezve akasarudzwa pavatambi vairura kudarika vese asati aregedza zvekutamba muna 2016.
Dynamos iri kuenderera mberi nekuunganidza vatambi vatsva pachibuda mashoko ekuti chikwata ichi chave pedyo nekuwirirana naChristian Ntouba wekuCameroon kuti adzoke kuDembare kubva kuZambia uko ari parizvino.
Murairidzi wechikwata ichi Tonderai Ndiraya ari kuunganidza chikwata chaarikuda kuti chirwire mukombe achiti iye arikuda vatambi vanoziva chinonzi kutambira Dynamos chii.
Izvi zvauya mushure mekunge Dembare yaunganidza vatambi gumi nemumwe chete vatsva kusanganisira Tino Chiunye na Sylvester Appiah kubva ku ZPC Kariba, Tymon Mvula kubva kuHwange, Juan Mutudza kubva ku Herentals, Byron Madzokere kubva kuYadah na Mike Twemwanjira kubva ku TelOne.
Ava vauya pamusoro paNkosi Mhlanga, Tanaka Chidhobha, na Trevor Mavhunga avo yakatenga kare vaine chinangwa yekuita zviri nani pane chinhanho chechipfumbamwe icho vakapedza vari mwaka wapera.
Mune imwe nyaya, zvikwata zvange zvichimirira nyika zvinoti FC Platinum neZimbabwe Under 17 yevasikana zvakabuditswa mumakwundano eCaf Champions League neWorld Cup.
MaYoung Mighty Warriors akarohwa 2-0 ndokubuda mumakwikwi aya 7-0 mushure mekunge vazvamburwa 5-0 mumutambo wekutanga apo vakashanya kuGaborone masvondo maviri apfuura.
Asi mumwe muteveri wemutambo wenhabvu muzvare Nyarai Masvaure vanoti vanasikana ava vanofanira kuramba vari pamwechete kuchivakwa chikwata chamangwana chemaMighty Warriors.
Kurohwa kwevanasikana ava kwakauya zuva, FC Platinum ichangobva zvekare kubuditswa muCaf Champions League yarohwa pamusha 1-0 neAl Hilal yekuSudan.
Chikwata chenyika chekiriketi chemaChevrons chiri kutamba neSri Lanka kuHarare Sports Club nhasi mumutambo wavo weChipiri wemaTest uchapera neChishanu.
Asi chikwata ichi hachina Kyle Jarvis uyo akakuvara pamutambo wekutanga. Zimbabwe yakarohwa nemawiketsi gumi mumutambo wekutanga, munhandare imwecheteyo.